နောက်ဆုံးသောကာလ၊ ယေရှု ဆိုတဲ့ ကယ်တင်ရှင်မေရှိယ ဂတိတော်အတိုင်း ပြန်လာချိန် အလွန်နီးနေပြီး ဆိုတာ အောက်ဖော်ပြပါ နမိတ်ကြီး (၄၀) နဲ့ ပြနေပါတယ်။ ကျမ်းစာထဲမှာ ရေးထားတာတွေ တကယ်ဖြစ်နေပါပြီ။ ပထမအကြိမ် ကြွလာတုန်းက လူအများမသိကြသလို ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာချိန်လည်း သတိမမူဖြစ်ကြမှာပါ။ နိမိတ်လက္ခဏာ ၄၀ ကို ဆင်ခြင်၊ ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် ကျွင်္နုပ်တို့ နှလုံးသားမှ အသင့် သတိရှိပါစေ။
၁။ False religions and deceivers shall increase.
မိစ္ဆာပရောဖက်၊ လွဲမှားသောဆရာများစွာ ပေါ်လာပြီး ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ဖို့ ဟောပြောကြပါမယ် (မသဲ ၂၄း၃၃)။ အခုခေတ်မှာ နာမည်ကျော် ဘုရားမဲ့ဝါဒီ မီဒီယာစကားပြောကောင်းသူများပေါ်လာပြီး၊ ဘုရားသခင်နဲ့ကျမ်းစာနဲ့ ဝေးစေအောင်ဆွဲဆောင်ပြောကြပါတယ်။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက ဘာမှပြန်မပြောပဲနေကြပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်ကတော့ ငြိမ်နေမယ်မဟုတ်ပါဘူး။
၂။ Good News of Jesus will be preached to all nations
ကောင်းကင်မှဂြိုလ်တု။ ဧ၀ံဂေလိတရားကို တကမ္ဘာလုံး ကြားအောင်၊ တရားစီရင်မဲ့နေ့ရောက်လာပြီး ဆိုတဲ့အကြောင်း ကောင်းကင်တမန်က ကြိးသောအသံနဲ့ကောင်းကင်အလယ်မှာ ၀ဲလျှက်နေတယ် (ဗျာဒိတ်၁၄း၆)။ ကောင်းကင်တမန် ဆိုတာ ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ ဂြိုလ်တု ဖြစ်ကြောင်း၊ ဧ၀ံဂေလိတရား၊ သတင်းကောင်းဖြစ်တဲ့ အပြစ်တွေလွှတ်ပေး၊ ကယ်တင်ခြင်းဟာ ယေရှုဖြစ်ကြောင်းကို တကမ္ဘာလုံးကြားအောင် ပြောခဲ့ပြီး။ သမ္မာကျမ်းစာကို ဘာသာပေါင်း ၂၄၀၀ နဲ့ ဘာသာပြန်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါဟာ တကမ္ဘာလုံး လူဦးရေနဲ့ ၉၀% ကြားပြီဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Born of Isreal after 1900 years.
အကြီးဆုံးလက္ခဏာ၊ အစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်လာခြင်း။ ပရောဖက်များစွာ နမိတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဟေရှာယ ၁၁း၁၁၊ ဧဇရ ၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉ နဲ့ လုကာ၂၁ တွေမှာ နောက်ဆုံးသော ကာလအချိန်မှာ ဂျူးလူမျိုးများ တဖန်ပြန်လည်စုစည်းကြမယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုးများ ယေရုဆလင်မြို့က နှင်ထုတ်ခြင်းခံရပြီး နှစ်ပေါင်း ၁၉၀၀ ကြာခဲ့ပြီး ရုတ်တရက် ဟေရှာယ ၆၆း၈ အတိုင်း ၁၉၄၈ခုနှစ် မေလ ၁၄ရက်မှာ နိုင်ငံဖြစ်လာ ပါတယ်။ ဥရောပ၊ အာရှ ၊ အမေရိက နိုင်ငံများစွာက ဂျူးလူမျိုးတွေ ပြန်လာကြပါတယ်။ ရုရှားနိုင်ငံက ၁သန်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ All against the Isreal
အစ္စရေးနိုင်ငံဟာ နှစ်၂ထောင်နီးပါးအကြာ တဖန်ပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်းများစွာက အစ္စရေးနိုင်ငံသစ်ကို တားမြစ်၊ နှောက်ရှက်ကြပါတယ်။ အခု ကုလသမဂ္ဂ ဆုံးဖြတ်ချက် Resolution များရဲ့ ၆၀% က အစ္စရေးကို ဆန့်ကျင်ချမှတ်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံ ၅၀ နဲ့ ရုရှား၊ တရုပ်၊ အီးယူ တို့က အစ္စရေးကို ဆန့်ကျင်နေကြပါတယ်။ ပရောဖက် ယောလ၊ အာမုတ်၊ ဟေရှာယ တို့ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်း စပျစ်နဲ့သီးပင်များ စိုက်ပျိုးကြတဲ့အတွက် သစ်ပင်ပေါင်း ၁၉၀၀ ဘီလျံ အစ္စရေးနိုင်ငံသစ်မှာ စိုက်ပျိုးပြီးခဲ့ပါပြီ။
၅။ Modern Israel Language
၁၉ ရာစု ဂျူးလူမျိုးရေး ၀ါဒီတယောက်ဖြစ်တဲ့ Eliezer Ben Yehuda ဆိုသူက ရှေးဟောင်း ဟီဘရူးဘာသာကို ခေတ်သစ်ဟီဘရူး စာပေအဖြစ် အဘိဓါန်ကို သူတစ်ယောက်တည်း ပြုစုထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက အစ္စရေးစာပေနဲ့စကားကို တလုံးတ၀တည်း ဖြစ်စေတဲ့ လုပ်ရပ်ကြီးတစ်ခုပါ။
၆။ Jerusalem City
ယေရုဆလင်မြို့တော် အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့မှာ အစ္စရေးလူမျိုးတွေ ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မယ်လို့ ကျမ်းစာမှာရေးထားပါတယ် (လုကာ ၂၁း၂၄)။ အေဒီ၇၀ ကတည်းက ယေရုဆလင်မြို့ကို လူမျိုးခြားတွေက အုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၇ အာရပ်-အစ္စရေး ၆ရက် စစ်ပွဲမှာ အစ္စရေးတွေ ယေရုဆလင်မြို့တော်ကို ပြန်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ၊ ဗာတီကင်ပုပ်ရဟန်းမင်းနဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေက ယေရုဆလင်မြို့တော်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ခွင့်မပြုပါ။ အစ္စရေးတွေက ယေရှုဆလင်မြို့ကို သူတို့မြို့တော်အဖြစ် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
၇။ Persecution of Israel People
အစ္စရေးလူမျိုးများလောက် ညှင်ပမ်းနှိပ်စက်၊ သတ်ဖြတ်ခံရတာ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်လူမျိုးမှ မရှိပါဘူး။ ဟစ်တလာ က မျိုးပြုတ်အောင်သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ အန္တီခရစ် ပေါ်လာရင် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာ အစ္စရေးတွေကို ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မရပါဘူး။ ဘုရားသခင်စောင့်ရှောက်ထားလို့ပါ။ ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက် အချက်ပေါင်း၇၀၀ မှာ အချက်၄၅၀ က အစ္စရေးကို ရှုံ့ချထားပါတယ်။
၈။ Psalm 83, Neighbor country will against Israel
ဆာလံ ၈၃ မှာ အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအားလုံးဟာ တညီတညွတ်ထဲ အစ္စရေးကို ဆန့်ကျင်ကြမယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ ဒီကနေ့ တကယ် ကျမ်းစာအတိုင်း ဖြစ်နေပါတယ်။
၉။ Israel shall be militarily superior to Egypt.
ကျမ်းစာဖြစ်ရပ်မှန်ကတော့ အစ္စရေးရဲ့ သဘာဝလွန်လက်ရှိအခြေအနေပါ။ ၁၉၄၈ အစ္စရေးနိုင်ငံ စတည်ထောင်ပြီးနောက် စစ်ပွဲကြီး၃ခု နဲ့ စစ်ပွဲငယ်များမှာ အင်အားခြင်းမမျှမတ အီဂျစ်နဲ့အာရပ်နိုင်ငံများစွာက တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခံရပါပေမဲ့ စစ်ပွဲတိုင်းကို အစ္စရေးတွေ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အနာဂါတ်စစ်ပွဲမှာ အစ္စရေးကို ချေးမှုန်းခံရမယ်ဆိုရင်တောင် ဘုရားသခင်က ကယ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Israel will bealand of unwalled villages.
ကျမ်းစာအရ အစ္စရေးနိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာက ပိုင်းခြားမယ်လို့ဆိုပါတယ် (ယောလ ၃း၂၊ ဒံယေလ ၁၁း၃၉)။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ ဆုံးဖြတ်ချက် ၁၈၁ ထုတ်ပြန်ပြီး၊ အစ္စရေးမြေကို ခွဲပြီး ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ ထူထောင်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ နိုင်ငံကို ခွဲခြမ်းလို့မရပါဘူး။ ယေရုဆလင်မြို့တော်မှာလဲ မွတ်ဆလင်တို့ရဲ့ ဗလီ Doom of the Rock နံရံနဲ့ ပိုင်းခြားထားခြင်းခံရပါတယ် (ဧဇရ ၃၈း၁၁)။ တံတိုင်းနဲ့ကာထားပေမဲ့ အခုခေတ်ကာလ လေကြောင်းလက်နက်များကြားမှာ တံတိုင်းနဲ့ကာကွယ်လို့မရတော့ပါ။
၁၁။ Jerusalem’s East Gate will be shut.
ယေရုဆလင်မြို့ရဲ့ အရှေဖက်တံခါးကို ကြည့်ပါ။ ဒီတံခါးက အမြဲပိတ်ထားပါတယ်။ ကျမ်းစာအရ မေရှိယပြန်မလာမချင်း ဒီတံခါး (Golden Gate) က ပိတ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် (ဧဇရ ၄၄း၁-၃)။
၁၂။ No king until Jesus returns
အစ္စရေးနိုင်ငံကို ပြန်လာတဲ့ ဂျူးလူမျိုးတွေမှာ ယေရှုဒုတိယအကြိမ် ကြွလာချိန်ထိအောင် ဘုရင်မရှိပါ (ဟောရှေ ၃း၎-၅)။ အမှန်တကယ်တော့ အစ္စရေးတွေမှာ ဘုရင်မရှိတာ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်ပါပြီ။ လက်ရှိ အစ္စရေးနိုင်ငံကို ပါတီစုံဒီမိုကရေစီနဲ့ အုပ်ချုပ်နေပါတယ်။
၁၃။ The ancient Jewish Temple will be rebuilt
ရှေးဟောင်း အစ္စရေးဗိမာန်တော်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပါမယ်။ ဒံယေလ၊ ယေရှု နဲ့ တမန်တော်ပေါလု၊ ယောဟန် တို့ပတတိယဗိမာန်တော် ဆောက်မယ်၊ ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။ အစ္စရေးဘက်ခြမ်း ယေရှုဆလင်ဗိမာန်မှာ ပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ထားပြီး၊ ယာဇ်မရောဟိတ် သင်တန်းများ ပေးနေကြပါပြီ။ ဗိမာန်တည်ဆောက်ပြီးရင် နောက်ဆုံးကာလ အာမဂါဒုန်စစ်ပွဲဖြစ်ပါတော့မယ်။
၁၄။ အီရန် (ကျမ်းစာမှာ ပါရှန်နိုင်ငံ) ကို အစ္စရေးနိုင်ငံပြန်ထူထောင်ရာမှာ ပြသနာလုပ်မဲ့ နိုင်ငံလို့ ကျမ်းစာမှာရေးထားပါတယ် (ဧဇရ ၃၈)။ အခု ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာလဲ အီရန်နိုင်ငံက အကြမ်းဖက်သမားအုပ်စုကို အားပေးနေပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တို့ရဲ့ ကိုရမ်ကျမ်းမှာလဲ သန့်ရှင်းသောစစ်ပွဲ Jihad တိုက်ကြဖို့ ရေးထားပါတယ်။
၁၅။ Turkey will also join in the attack on Israel
တူရကီနိုင်ငံလည်း အစ္စရေးကို တိုက်ခိုက်တဲ့ နိုင်ငံအဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းပါမယ် (ဧဇရ ၃၈)။ ၂၀၀၂ တုန်းကလည်း အစ္စရေးကို တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ မှာ တူရကီက အစ္စလမ်ဝါဒီ သမ္မတကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပါတယ်။ ဟစ်တလာရဲ့ လူမျိုးရေးဝါဒ စာအုပ်ကလည်း တူရကီနိုင်ငံမှာ ရောင်းကောင်းနေပါတယ်။ ဥရောပဘုံဈေး အီးယူအဖွဲ့ကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းအတိုင်း ၁၀နိုင်ငံနဲ့ စတင်ခဲ့ပေမဲ့ ၂၀၁၇ မှာ နိုင်ငံပေါင်း၃၀လောက် ဖြစ်လာပြီ၊ တူရကီနိုင်ငံကိုပါ လက်ခံဖို့ စဉ်းစားနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နောင်တချိန် အီးယူ က အစ္စရေးကို တိုက်ခိုက်မဲ့ နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ တူရကီ အီးယူဝင်ဖို့လုပ်နေတာ၊ နောက်ဆုံးကာလအချိန် ဖြစ်နေပါတယ်။
၁၆။ The Middle East Peace Process
အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေး အော်ဟစ်နေကြပါတယ် (၁သက်၅း၃)။ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုပေးပြီး၊ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို အထူးကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ .
၁၇။ Damascus, the capital of Syria; it will be destroyed
ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြို့တော် ဒမတ်စကပ်ဖျက်ဆိးခံရမယ်။ (ဟေရှာရ ၁၇း ၁၊ ၁၄)။ လက်ရှိ ဒမတ်စကပ်မြို့တော်ဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ တော်တော် ရှုပ်ထွေးနေပြီ ဖြစ်ပြီး ပျက်စီးမဲ့အခြေအနေ ရောက်နေပါပြီ။
၁၈။ Satellite television Telephones
ယနေ့ ကမ္ဘာ့ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး စနစ်ဟာ ကွန်ပြူတာ၊ တယ်လီဗွီး၇ှင်း၊ ကမ္ဘာပတ်ဂြိုလ်တုများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ တက်ပလက် တိုးကက်နေပါတယ် (ဗျာဒိတ် ၁၁း၉-၁၀၊ ဗျာဒိတ် ၁၇း၈)။ ရှင်ယောဟန်ဗျာဒိတ်အတိုင်း အလင်းအလျှင်နဲ့ ဆက်သွယ်နေကြပါပြီ။
၁၉။ The human species will be capable of destroying all life လူသားမျိုးနွယ်တွေဟာ သက်ရှိအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ပါတယ် (မသဲ ၂၄း၂၂)။ သမရိုးကျ ဒါး၊ လှံ၊ လေးမြှား၊ သေနပ် တွေကနေ ညူကလီယာ၊ ဇီဝလက်နက်၊ ဓါတုလက်နက်တွေ ပိုင်ဆိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ညူကလီယာလက်နက်ကို ဇာခရိ ၁၄း၁၂ မှာ ပုံဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဘုရားသခင်က လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကတည်းက ညူထရွန်ဗုံးက အားလုံးကို အရည်ပျော်သွား စေပါမယ်။ ဒုံးပျံနဲ့ ဒုံပျံပစ်စင် လက်နက်များတီထွင်ကြပါတယ် (ဗျာဒိတ် ၉း၁၇-၁၉)။ ကျမ်းစာမှာပါတဲ့ ခံတွင်းထဲက ကန့်၊ မီးလျှံ ၊ မီးခိုး ထွက်ကြ၏ ဆိုတာ ဒုံးပျံ လက်နက်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ညူကလီယား နဲ့ ဇီဝလက်နက်ကြီးများ တီထွင် ထုတ်လုပ်ကြမယ် (ဗျာဒိတ် ၁၁း၁၈၊ မသဲ ၂၄း၂၁-၂၂)။ အနုမြူဗုံးကို တီထွင်ပြီး အခု၂၀၁၇ မှာ ညူကလီယားဗုံးများဟာ အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်၊ တတိယ ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ရင် တမဟုတ်ချင်း လူသန်း၅၀၀ သေဆုံးမှာဖြစ်ပြီး၊ လူပေါင်း သန်း၄၀၀၀ ကတော့ ပြင်းပြနာကြင်စွာနဲ့သေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀။ Chaotic Weather
ကဗြောင်းကဗြန် ရာသီဥတုဖြစ်ခြင်းက အသစ်အဆန်းမဟုတ်တော့ပါ (လုကာ ၂၁း၂၅)။ နောက်ဆုံးကာလမှာ ဆူနာမီ၊ လှိုင်းကြီးတွေ ဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးများဟာ ပင်လယ်အောက် မြေငလျင်နဲ့စွမ်းအားကြီးများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာပြိး၊ ၁၉၀၀ နောက်ပိုင်းမှာ မြေငလျင်အလွန်များပြားလာသလို ဆူနာမီလှိုင်းလုံးများလဲ ယခင်ရာစုများထက် အလွန့်အလွန်များပြားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြင်း၊ အိုဇုန်းလွှာပေါက်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မုန်တိုင်းများစွာ မကြုံစဖူး ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
၂၁။ Europe will eventually dominate the world
ဒံယေလကျမ်းစာအရ ဥရောပတိုက်တစည်းတလုံးတည်း ရောမအင်ပါယာခေတ်ပြီးတဲ့နောက်၊ နောက်ဆုံးကာလအချိန် ဥရောပတိုက်နိုင်ငံများ ပြန်လည်တစည်းတလုံးတည်း ဖြစ်လာမယ် ရေးထားပါတယ်။ အီးယူ ဥရောပယူနီယံ အဖွဲ့ကြိး ပေါ်ပေါက်လာပြီး၊ ပါလီမာန်၊ တရားရုံ၊ ငွေစက္ကူ တွေအပြင် ခရီးသွားဗီဇာပါ မလိုတော့တဲ့ အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါက ယေရှု ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာမယ် ဆိုတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ပရောဖက်ပြုမှု မှန်ကန်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၂၂။ The violent murder
သခင်ယေရှုက ပြောခဲ့ပါတယ်။ စစ်ပွဲ နဲ့ အကြမ်းဖက်မှုသတ်ဖြတ်မှုတွေ အမြောက်အများ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ဖြစ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ယနေ့ကာလမှာ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော စစ်ပွဲများ ဖြစ်နေပြီး၊ မမွေးသေးတဲ့ ကလေးငယ်များကို သတ်ဖြတ်ပစ်မှုဟာ အလွန်များပြားနေပါတယ်။ အချက်အလက်များအရ ၄၆သန်းသော ကလေးငယ်များ သန္ဓေဖျက်ချခြင်း ခံနေရပါတယ်။
၂၃။ Travel shall increase in the time of the end
နောက်ဆုံးကာလမှာ လူသားတွေ ခရီးများစွာသွားလာကြမယ် (ဒံယေလ ၁၂း၎)။ သင်္ဘော၊ မော်တော်ကား၊ လေယာဉ်ပျံ တီထွင်မှုများကနေ လူသားတွေ ကမ္ဘာအနှံ့သွားလာနိုင်လာတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ တုန်းက မြင်း၊နွား တွေနဲ့ပဲ သွားလာရာကနေ ၁၇ရာစု စက်မှုတော်လှန်ရေးကြောင့် စက်များတီထွင်လာပြီး၊ အခုခေတ်မှာ လေယဉ်ပျံတွေနဲ့ လူသားတွေ အလွန်ခရီးသွားနိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၄။ Knowledge shall increase in the time of the end
နောက်ဆုံးကာလမှာ လူသားတွေရဲ့ ဗဟုသုတ အလွန်ကြွယ်ဝလာမယ် (ဒံယေလ ၁၂း၎)။ ၂၀ရာစုမှာ သိပ္ပံပညာ၊ နည်းပညာ၊ တီထွင်မှုတွေ မြောက်များစွာ ဖြစ်လာပါတယ်။ မော်တော်ကား၊ လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်၊ ကွန်ပြူတာ၊ ညူကလီယာစွမ်းအင်၊ ဂြိုလ်တု၊ အာကာသခရီး၊ တယ်လီဖုန်း၊ အင်တာနက်၊ မိုဘိုင်း၊ တီဗွီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ခရီး၊ ဆေးပညာ၊ ကြောက်မက်ဖွယ်လက်နက်များ နဲ့ မူးယစ်ဆေးမျိုးစုံ၊ ရောဂါများစွာ ဖြစ်လာပါတယ်။
၂၅။ A mark on their right hand or on their forehead
လူများရဲ့ ညာဖက်လက်ဖမိုး နဲ့ နဖူး တွေမှာ တံဆိပ်ခပ်ခြင်းလုပ်ကြမယ် (ဒံယေလ ၁၃း၂၆)။ လူတွေဟာ တက်တူးထိုးခြင်း၊ နားဖောက်ခြင်း၊ အသားအရေပေါ်အမှတ်အသားများ လုပ်လာကြပါတယ်။ ကမ္ဘာသမိုင်းမှာ ပထမဆုံး ဘားကုတ်လို ကုန်တံဆိပ်အမှတ်သား နည်းပညာပေါ်လာပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအစိုးရတိုင်းက မိမိတိုင်းပြည်များကို တညီတညွတ်တည်း ဖြစ်လိုပြီး၊ တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံ ငွေကြေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများကို ထိန်းချုပ်ဖို့လိုလာပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ နည်းပညာနဲ့ ချစ်ပ် ဆိုတဲ့ အပြားလေးတွေကို ညာလက်ဖမိုး နဲ့ နဖူး နေ၇ာများမှာထည့်သွင်းခြင်းက အသင့်လျော်ဆုံးနေရာ ဖြစ်တယ် ဆိုပါတယ်။
၂၆။ Pestilence and Diseases shall increase
ကာလနာများပြားခြင်း ဖြစ်လာပါတယ် (မသဲ ၂၄း၇)။ ဗိုင်းယပ်စ် များကြောင့် ရောဂါများစွာဖြစ်လာပြီး လူသန်းပေါင်းများစွာ သေကြေကြပါတယ်။ AIDS (သန်းပေါင်း၃၀သေဆုံး)၊ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ၊ ဟိုက်ပါတက်တစ်ဘီ၊ စီ၊ တီဘီ (၃သန်းသေဆုံး)၊ ငှက်ဖျား၊ ပိုလီယို၊ တိုက်ဖွိုက်၊ ကင်ဆာ၊ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါ၊ ပါကစ်ဆင်ရောဂါ၊ မက်ကောင်းရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ အလွန်များပြားတဲ့ ရောဂါများ ဒီခေတ်ကာလထဲမှာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်က သိပ္ပံပညာရှင်များက ဆေးပညာအားဖြင့် ရောဂါအားလုံးကို ကုသပျောက်ကင်းနိုင်တော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးပညာအလွန်တိုးတက်လာသလို ကြောက်မက်ဖွယ်ရောဂါ၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေလည်း အလွန်များပြားလာတာ နောက်ဆုံးကာလပါပဲ။ ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါများမှာ မူးရစ်ဆေးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေက အများဆုံးပါ။
၂ရ။ Famines shall increase.
အရပ်ရပ်တို့၌ အစာခေါင်းပါးခြင်း ဖြစ်လာပါမယ် (မသဲ၂၄း၇။ လုကာ ၂၁း၁၁။ ဗျာဒိတ် ၆)။ အစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုတွေဖြစ်ရခြင်းက မိုးခေါင်ခြင်း၊ ရေဘေး၊ စိုက်ပျိုးရေးမအောင်မြင်မှု။ ပိုးမွှား၊ ကာလနာ၊ ရောဂါများပြားခြင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကမ္ဘာမှာ လူဦးရေ သန်းပေါင်း၈၀၀ အလွန်ဆင်းရဲမွဲတေပြီး အစာမလုံလောက် ငတ်မွတ်နေကြပါတယ်။ အာဖရိကနိုင်ငံများစွာ၊ မြောက်ကိုးရိးယား၊ အာဖဂန်နစ္စတန် တို့ဖြစ်ပါတယ်။
၂၈။ Blood Moon
လအနီရောင် ဖြစ်ရပ်ကြီးက ၂၀၁၄ခုနှစ် ဧပြီလမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် (လုကာ ၂း၂၀၊ ဗျာဒိတ် ၂၁း၁၁) ။ ၄ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက နောက်ဆုံးကာလ နီးနေကြောင်း ဘုရားသခင်ရဲ့ ကောင်းကင်မှာ ပြသတဲ့ သင်္ကေတကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
၂၉။ A solar eclipse will come
လအနီရောင်ဖြစ်ခြင်း များဖြစ်ပေါ်ပြီး ကြားကာလမှာ နေကြပ်မယ်လို့ ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာ ရေးထားပါတယ်။ ၂၀၁၄ ဧပြီ ၁၅၊ အောက်တိုဘာ ၈ နှစ်ခါလအနီရောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး ၂၀၁၅ မတ်၂၀ မှာ နေကြပ်ပါတယ်။ နောက် ဧပြီ၎၊ စက်တင်ဘာ၂၈ တို့မှာ လအနီရောင် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။
၃၀။ World population shall greatly increase
ကမ္ဘာ့လူဦးရေအလွန်များပြားလာပါတယ်။ နောက်ဆုံးသောကာလမှာ လူ သန်းပေါင်း၂၀၀ ပါတဲ့ စစ်တပ်ကြီးအကြောင်း ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာရေးထားပါတယ်။ (ဗျာ ၉း၁၆)။ ဒီစစ်တပ်ကြီးဟာ ဥဖရက်မြစ်အလွန်က ချီတက်လာမယ်။ တရုပ်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ လူသား သုံးပုံတစ်ပုံသေကြမယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂၀၀၀ ပရောဖက်ပြုစဉ်က သန်း၂၀၀ စစ်တပ်ကြီးဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အခုချိန်မှာ တရုပ်ပြည်ကြီးက လူဥိးရေသန်းပေါင်း ၁၃၀၀ ရှိနေတဲ့အတွက် ကျမ်းစာအတိုင်း လူသန်း၂၀၀ စစ်တပ်ကြီးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်နေပါပြီ။ တရုပ်ပြည်တစ်ခုထဲ စစ်သည် သန်း၂၈၀ ရနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံး လူဥိးရေ ၁၈၀၀ခုနှစ်က သန်း၁ထောင်ပဲ ရှိနေပေမဲ့ တမုဟုတ်ခြင်း ၂၀၀၀ခုနှစ်မှာ သန်းပေါင်း ၇၀၀၀ ရှိသွားပါပြီ။
၃၁။ Earth Quake
မြေငလျင်ကြီးများ အလွန်များပြားပါတယ် (မသဲ ၂၄း၇)။
အလွန်ကြီးမားတဲ့ မြေငလျင်ကြီးတွေ ၁၉၀၀ နောက်ပိုင်းမှာ တကမ္ဘာလုံး မကြုံစဖူး ဖြစ်ပွားလာပြီး၊ မြို့ကြီးများ၊ နိုင်ငံများ မြေငလျင်အောက် ကျဆုံးရပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုမှာပဲ မြေငလျှင် ၁၅ခု ပြင်းအား ရစ်ချတာစကေး ၇.၁ အထက်လှုပ်ပါတယ်။ Australian Seismic Center အချက်အလက်အရ နေ့တိုင်း ငလျှင် ၁၀၀ခု လှုပ်နေပါတယ်။ ၇၅% ငလျှင်များက ရစ်ချတာစကေး ၃ ရှိပြီး ၂၅% ကတော့ ၄ ထက်များပါတယ်။ ပင်လယ်ပြင်က မြေငလျှင်ကြောင့် စူနာမီလှိုင်းလုံးများ ဖြစ်ပေါ်လာမှု မကြာခဏဖြစ်လာပါတယ်။
၃၂။ Concerns the state of marriage
လက်ထပ်မဂ်လာ ဆိုတာယောင်္ကျားမိန်းမ တို့အတွက် ဘုရားသခင်က လူသားတွေကို ဂုဏ်ပြုပေးအပ်ခဲ့တာပါ။ ဒါကို လူများစွာတို့က ဂရုမစိုက်ဖြစ်ကြမယ် (၁တိ၎း၃)။ ရိုမင်ကာသိုလစ်ခရစ်ယန်များမှာ သင်းအုပ်၊ သီလရှင် အများအပြားဟာ လက်ထပ်ခြင်း တားမြစ်ခံရတော့ အချို့သော လိင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြသနာများ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် နောက်ဆုံးကာလမှာ ဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ လိင်တူ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခွင့်ကို တရားဝင်ပေးအပ်လာဖြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေ အကျင့်စရိုက်ဆိုး တိုးပွားများပြားလာမယ်၊ ဆုံးမပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်။ (ဟေ ၁၃း၁၁၊ ဟေ ၂၆း၂၁)။ ဘုရားသခင်၊ ကျမ်းစာ၊ အသင်းတော် များနဲ့မနေတော့ပဲ
ယနေ့ခေတ်ကာလ လူတွေရဲ့ စာရိတ္တတွေ ပျက်ပြားလာကြမယ်။ နောက်ဆုံးကာလ ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ် (၂တိ၃း၁-၅)။ ကိုယ်ကျိုးကြည့်ခြင်း၊ ၀ါကြွားခြင်း၊ လောဘကြီးခြင်း။ ကျေးဇူးကန်းခြင်း၊ ကလေးဖျက်ချခြင်း၊ မတရားသောမေထုန်၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း။ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လောကဇိမ်ခံခြင်း တီဗွီ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ အားကစား၊ အလှပ ..တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေမယ်။
၃၃။ Prediction of rampant sexual immorality
မတရားသောမေထုန်၊ လိင်မှုပြသနာများ၊ အဓမ္မမှု၊ သက်ငယ်မုဒိမ်း၊ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုများစွာ ဆိုးညစ်တဲ့နှလုံးသား ကျူးလွန်လာပါမယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဘယ်သောခါမှ ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယိုများစွာ အခုခေတ် မိုဘိုင်းဖုန်း၊ တီဗွီ၊ ဗွီဒီယိုများမှာ အလွယ်တကူ ရရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စာရိတ္တပျက်ပြားမှု၊ ရာဇ၀တ်မှုများစွာ မကြုံစဖူး ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ AIDS (သန်းပေါင်း၃၀သေဆုံး)၊ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ၊ ဟိုက်ပါတက်တစ်ဘီ၊ စီ၊ တီဘီ (၃သန်းသေဆုံး)၊ ငှက်ဖျား၊ ပိုလီယို၊ တိုက်ဖွိုက်၊ ကင်ဆာ၊ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါ၊ ပါကစ်ဆင်ရောဂါ၊ မက်ကောင်းရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ အလွန်များပြားတဲ့ ရောဂါများ ဒီခေတ်ကာလထဲမှာ ဖြစ်နေပါတယ်။
၃၄။ Wickedness will increase. inordinate self-love
လူတွေ အကျင့်စရိုက်ဆိုး တိုးပွားများပြားလာမယ်၊ ဆုံးမပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်။ (ဟေ ၁၃း၁၁၊ ဟေ ၂၆း၂၁)။ ဘုရားသခင်၊ ကျမ်းစာ၊ အသင်းတော် များနဲ့မနေတော့ပဲ
ယနေ့ခေတ်ကာလ လူတွေရဲ့ စာရိတ္တတွေ ပျက်ပြားလာကြမယ်။ နောက်ဆုံးကာလ ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ် (၂တိ၃း၁-၅)။ မိမိကိုယ်ကျိုးကြည့်ခြင်း၊ ၀ါကြွားခြင်း၊ လောဘကြီးခြင်း။ ကျေးဇူးကန်းခြင်း၊ ကလေးဖျက်ချခြင်း၊ မတရားသောမေထုန်၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း။ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လောကဇိမ်ခံခြင်း တီဗွီ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ အားကစား၊ အလှပ ..တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေမယ်။
၃၅။ Worldwide Persecution of Christian.
တကမ္ဘာလုံး ခရစ်တော်နောက်လိုက်များ ညှင်းပမ်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံရမယ်။ အခုရာစုနှစ်အတွင်း သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူများ အရေအတွက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်အားလုံးမှာ သတ်ဖြတ်ခံရတာထက် ပိုများပြားပါတယ်။ မာတုရ ခရစ်ယန်များစွာ အရှေ့အယ်ပိုင်းနိုင်ငံများ၊ အာဖရိကနိုင်ဂျီးရီးယား၊ အာရှ ပါကစ္စတန်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ မြောက်ကိုးရီးယားတွေမှာ မတရားစွပ်စွဲ၊ ညှင်ပမ်းနှိပ်စက်၊ သတ်ဖြတ်ခံနေရပါတယ်။ IS လို့ခေါ်တဲ့ မွတ်ဆလင်အကြမ်းဖက်အုပ်စု ဆီးရီးယား၊ အီရတ်၊ လစ်ဗျားနိုင်ငံများက စတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီး၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများက ခရစ်ယန်များကို ခေါင်းဖြတ်၊ သတ်ဖြတ်နေကြပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံး ဥရောပ၊အမေရိက မြို့ကြီးများစွာမှာ နယူးယောက် 9/11 အပါအ၀င်၊ အကြမ်းဖက် ဗုံးဖောက်ခွဲခြင်း အသေခံသတ်ဖြတ်ခြင်း များစွာ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
၃၆။ False religions and deceivers shall increase
လွဲမှားသောကိုးကွယ်မှုများ၊ မိစ္ဆာပရောဖက် ဆရာများစွာပေါ်လာပါမယ် (မသဲ ၂၄း၃-၅။ ငါဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနေတဲ့လူတွေများစွာ တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာ လွဲမှားတဲ့ဓမ္မဆရာ (မိစ္ဆာဆရာ) cluts ၃၀၀၀ လောက်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေက သမ္မာကျမ်းစာကို အယောင်ပြထားပြီး သူတို့ရေးထားတဲ့ စာအုပ်များကို အခြေခံထားတဲ့ လွဲမှားသောကိုးကွယ်မှုများဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ရှင် လို့ဟောပြောရမဲ့အစား ကျင့်ထုံးနဲ့အကျင့်ကိုဦးစားပေးတဲ့ လွဲမှားတဲ့ ကိုးကွယ်မှုနဲ့လွဲမှာတဲ့ဆရာများစွာ ပေါ်နေပါပြီ။
၃၇။ Church practice the forbidden in the Bible
ယေရုဆလင်မြို့။ နောက်ဆုံးသောကာလ ယေရှုကြွလာမဲ့နေရာက ယေရှုဆလင်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လွဲမှားသောသွန်သင်ချက်များက တခြားနေရာ (ရောမမြို့၊ ဗာတီကန်) စသဖြင့် ပြောနေကြပါတယ်။ ပညတ်တော်(၁၀)ပါးကိုလည်း အရေးမထားကြတော့ပါ။ အခုခေတ် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ကြီးများက ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်း၊ နှုတ်ကပတ်တော်(ကျမ်းစာ)လေ့လာခြင်းများကို ဦးထိပ်ထားရမဲ့အစား၊ လူမှုရေး၊ လူမျိုးရေး၊ ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ ယောဂီတရားထိုင်ခြင်း၊ ချမ်းသာကျမ်းမာခြင်း စတဲ့ အလေ့အကျင့်များကို ပိုဦးစားပေးလာနေကြပါတယ်။ ယေရှုဆလင်မြို့နဲ့ ဂျူးလူမျိုးများအတွက် ဘုရားသခင်ရဲ့ သနားဂရုဏာ တဖန်ခံစားဖို့ ဆုတောင်းပေးရပါမယ်။
၃၈။ Many Muslim nations shall oppose Israel
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများက ရုရှားဦးဆောင်ပြီး၊ အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ပါမယ်။ (ဧဇရ ၃၈း ၅-၆၊ ၁၃)။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ အစ္စရေးနိုင်ငံ စတင်တည်ထောင်တဲ့နှစ် လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲ ၁၉၄၈၊ ဆိုင်းနိုင်းစစ်ပွဲ ၁၉၅၈၊ ၆ရက်စစ်ပွဲ ၁၉၆၇၊ ယွန်ကပူးစစ်ပွဲ ၁၉၇၃ များကို ရုရှားကူညီမှုနဲ့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်၊ ယေရုဆလင်မြို့တော်ကို ၁၉၆၇ စစ်ပွဲမှာ အပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်ပွဲတိုင်း အနီုင်ရခဲ့ပါတယ်။ အခု နောက်ဆုံး စစ်ပွဲကြီး အာမဂဒုန်စစ်ပွဲ မှာတော့ အစ္စရေးဘက်က၊ အမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ တို့ကူညီကြပြီး၊ အန္တီခရစ် ဘက်က မြောက်ဖက်က အီးယူ၊ ရုရှား၊ အီရန်တို့တိုက်ခိုက်ကြမယ်၊ စစ်ရှုံးတဲ့အခါ အရှေ့ဘက်က တရုပ်ပြည်နဲ့ဂျပန် မဟာမိတ်စစ်တပ်ကြီး သန်း၂၀၀ တို့က ယူးဖရိတ်မြစ်ကို ပိတ်ပြီး လာရောက် စစ်ပွဲကြီးတိုက်ကြရပါမယ်။ အာမဂဒုန်စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ (ဗျာဒိတ် ၁၆း၁၂)
၃၉း Babylon emerge asaprominent force or city
နောက်ဆုံးကာလမှာ ဘေဘီလုန်ပြန်လည်တန်ခိုးကြီးလာခြင်း (ဗျာဒိတ်)။ ကျမ်းစာ ပညာရှင်များကတော့ အီရတ်နိုင်ငံမှာ ဆဒန်ဟူစိန် ရေနံကြွယ်ဝခြင်း၊ စစ်အင်အားကြီးခြင်း၊ အမေရိကန်နဲ့စစ်ပြိုင်ခြင်း တွေကို ဘေဘီလုန်မြို့တော် တန်ခိုးပြန်လည်ကြီးထွားလာခြင်းနဲ့ ဖေါ်ပြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘေဘီလုန် (သို့မဟုတ်) ဆော်ဒီအာရေဗျမြို့တော်မက္ကာ (သို့မဟုတ်) အီတလီနိုင်ငံရောမမြို့တော် တို့ကိုလည်း ရည်ညွန်းကြပါတယ်။
၄၀။ Mockery of the Second Coming
အဆုံးသတ်အချက်ကတော့ လူတွေပေါ့ပေါ့ဆဆ နေထိုင်စားသောက်၊ပြက်ယယ်ပြု ပြောဆိုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ် (၂ပေ၃း၂-၁၃)။ နောက်ဆုံးကာလ ရောက်လုပြိ၊ ရောက်နေပြီ သတိပေးလဲ၊ အေးပါ၊ နှစ်၂ထောင်ကတည်းက ရောက်တော့မယ်ပြောကြတာပဲ လို့၊ ဂရုမစိုက် နေထိုင်သွားသူများ အတွက် မျက်ရည်နဲ့အနွံ့တာထားပြီး အဆင်သင့်ပြင်ထားဖို့ ပြောရပါမယ်။ တယောက်ရရင် တယောက်ကို မေတ္တာနဲ့ ဆွဲခေါ်ရပါမယ်။ မိမိ မိတ်ဆွေတွေကို “ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းအတွက် အသင့်ဖြစ်ပြီလား” ..လို့ မေးရပါမယ်။ သူတို့က မသိဘူး၊ မဖြစ်သေးဘူး ..လို့အဖြေပေးရင်၊ သူတို့ကို သတင်းကောင်းပြောပြရပါမယ်။ သူတို့အတွက် ၀န်တာထားပြီး၊ နောက်ဆုံးသောကာလမှာ ဘေးဒဏ်ကြီးတွေ မခံစားစေဖို့ ဆုတောင်း၊ ဖိတ်ခေါ်ရပါမယ်။
နောက်ဆုံးသောကလဟာ အင်မတန် နီးကပ်နေပါပြီ။ အထက်က ရေးခဲ့တဲ့ အချက်ပေါင်း (၄၀) ဟာ အလွန်ထင်ရှား၊ တိကျတဲ့ ကျမ်းစာမှာရေးထားတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်နေပါပြီ။ မကြာခင် ချီဆောင်ခြင်းကာလ ရောက်ပါတော့မယ်။
ကျွန်တော်၊ ကျွန်မတို့ ယေရှုကိုလက်ခံပြီး ဘု၇ားစကားကိုနားထောင်ကြတဲ့အတွက် နောက်ဆုံးသောကာလ၊ ဘေးဒဏ်ကြီးများက လွတ်မြောက်ပြီး ချီဆောင်ခြင်း နဲ့အတူ ဘုရားသခင်နဲ့ထာဝရ ရှိနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ရဲ့ အပြစ်တွေ၊ အားနည်းချက်တွေ သင်နောင်တရရင်၊ အားလုံးကို သခင်ယေရှုက ဖြေလွှတ်၊ ယူဆောင်သွားပါတယ်။ ၊ သခင်ယေရှုကို သင့်ရဲ့ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံပါသလား၊ သင်လက်ခံရင် သင်ဘာလူမျိုး၊ ဘယ်ဘာသာဖြစ်ပါစေ၊ ယေရှုကလည်း သင့်ကိုလက်ခံပါမယ်။ ယေရှု ကျွန်တော်နဲ့သင်တို့အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ အသေခံ၊ အသွေးသွန်းလောင်းသွားပါတယ်။ ယေရှုကို နှလုံးသားက လက်ခံခြင်းဟာ ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ အစဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်လိုက်ပါ။ အတူလိုက်ဆိုကြည့်ပါ။
“ အဖဘုရားသခင်။ … ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ နှလုံးသားထဲက ဆုတောင်းပါတယ်။ သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်မေရှိယ သေခြင်းမှရှင်ပြန်လည်ထလာခြင်းကို ယုံကြည်ပါတယ်။ သခင်ယေရှုဟာ ကျွန်တော်၊ကျွန်မရဲ့ အရှင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်၊ နှုတ်မှ ၀န်ခံ၊ ပြောဆိုသက်သေခံပါတယ်။ အာ မင်..။ ”
ဤစာ ဖတ်ရှုသူအတွက်လည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် သင်နဲ့အတူရှိပါစေ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် သင့်ကို လွတ်မြောက်ခြင်းပို၍ ပေးပါစေ။ www.exploits.tv မှာလည်း ၀ိညာဉ်ရေး ဗွီဒီယို၊ စာစောင်များကို ဖတ်ရှုပါ။ ခွန်အားပေးပါတယ်။
ရှာလုန် ..သင်တို့၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်း၊ . အာ..မင်။
ခရစ်စတင်းဒတ်ဂ်ျ Christine Darg
၂။ http://jerusalemchannel.tv/40-signs-second-coming/ (Text)
၃။ https://www.youtube.com/watch?v=AGo24nC3_HU (Video)
၄။ နာဂကျော်နိုင်၊ ဆရာစောပက်ထရစ်၊ ဆရာပက်ထရစ်ဂေဗြဲ